Gaadiidka Kayseri Inc. Turkey ayaa noqonaya brand ah | RayHaber | raillynews
HometareenkaKayseri Gaadiidka Inc. Turkey ayaa noqonaya Dhuxul
06 / 04 / 2016 tareenka, GUUD, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
Kayseri Gaadiidka Inc. Turkey ayaa noqonaya brand ah: Kayseri Metropolitan degmada Gaadiidka Inc. ayaa ku daray mashruuc cusub qiyaasta heer qaran. Hantidhaweynta hirgelinta Nidaamka Wadaaga Baaskiil-wadareedka, oo ay bixisay Waaxda Adeegyada Taageerada Dawlada Mersin (Magaalooyinka), waxaa soo gudbiyay Kayseri Gaadiidka. Waxa uu ku guuleystay.
Kayseri Transportation Co. oo maamusha nidaamka wadaaga baaskiilka ee degmada Kayseri tan iyo 2010. waxay sii wadaa inay bixiso nidaamyo wadaag ah oo baaskiil wadaag ah oo lagu horumariyo adeegyada magaalooyinka kale. Sanadka 2014, Kayseri Gaadiidka Inc., oo ku guulaysatay hannaanka nidaamka wadaagista baaskiilka ee degmada Mugla, ayaa hirgeliyay afar xarumood oo 40 bicycle ah. Metropolitan Metropolitan Magistrate's 150 baaskiilada tartanka baaskiifka caqli galka ah oo bixiya hindisaha ugu faa'iidada badan ayaa ku daray adeeg cusub oo adeeg ah.
Kayseri Gaadiidka Inc. Marka lagu daro hawlgalka gaadiidka dadweynaha ee Kayseri, shirkaddu waxay si deg deg ah ugu sii socotaa si ay u noqoto calaamad ku jirta nidaamka gaadiidka iyada oo bixisa la-talin iyo taageero farsamo mashaariicda ku saleysan qaran ahaan. Iyadoo dhawaan ay qabatay shaqooyinka dayactirka korontada ee TCDD IZBAN ee xuduudka magaalada, Kayseri Transportation Inc. waxay soo saartaa adeegyo qiimo leh ku dari doona qaybta iyada oo la adeegsanayo aqoontooda iyo awoodeeda shaqo.
Duqa degmada Kayseri Metropolitan Mustafa Caddan aad ayuu ugu faraxsan yahay in uu arko waxyaabaha ay soo saareen Kayseri Gawaarida Gaarka ah adoo soo galaya hindise ku saleysan qaran, iyo in gundhigga lagu guuleystey uu yahay jawi bey'adeed oo wanaagsan iyo hab nololeed nadaamsan.
Gaadiidka Tareenka, mashruuca iyo dhismaha, maareynta nidaamka gaadiidka dadweynaha, nidaamka wadaaga baaskiilka magaalooyinka, nidaamka kontoroolka elektarooniga (TEDES) iyo nidaamka gaadiidka caqliga ah ee Gaadiidka. Mudane Mustafa Cilmi ayaa sheegay in shirkaddu ay leedahay aqoon iyo qalab ku filan oo ay R & D ka shaqeeyaan maadooyinkan oo dhan, magaalooyinka kalena waxay sameeyeen mashaariic iyo alaabo. magaalooyinka Nidaamka share baaskiil ugu horeysay ee Turkey Kayseri Metropolitan Madaxweynaha xusuusiyey in degmada furay Steel, users hadda 7000, saldhigga baaskiil 35 leh tirada ugu badan ee dadka isticmaala oo sheegay in ay haystaan ​​nidaam baaskiil wadaagga ah ee Turkey. Iyadoo ay ku adkeeysan yihiin in ay horumariyeen nidaamyadoodii baaskiil ahaaneed ee ay wadaagaan iyaga oo la shaqeynaya 100 gudaha guryaha iyaga oo isticmaalaya faa'idada ah inay noqdaan kuwa ugu horreeya, Duqa Magaalada ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay u adeegaan degmooyinka iyo hay'adaha doonaya arrimahaas.
Huloge 'Pulman' oo ku taala wadada
TÜDEMSAŞ waa midka ugu isticmaalka badan ee ugu muhiimsan Sivas
7 ee adduunka. Waxaan soo saarnay nooca taraamka
Nidaamka gaadiidka dadweynaha ee Kayseri
Iskudhicii sababay maqnaanshaha maqnaashaha ee İzmir Metro ayaa hakiyay saacadaha 3